Farshaxaniste ku nool farshaxankiisa, oo ku nool halka uu doonayo, oo ku nool sida uu u arko mid ku habboon, oo aan cidna ku xirnayn, waa qof mudnaan leh oo aan xaq u lahayn inuu u hadlo kuwa kale. Akhri wax dheeraad ah
Waalidiinta Caddaanka / reer galbeedka waxay ubadkooda u diyaariyaan xaqiiqada dunidan, sida ay isu difaacaan, inay had iyo jeer u xukumaan jinsilada kale, ee aysan sugin waxa loogu yeero Ilaaha ilaahey. Akhri wax dheeraad ah
Dooddu way furan tahay! Saboolnimadu waxay ku kaliftaa qoysaskeena inay aqbalaan wax walba. "Shiineysku waxay ku dhammeyn doonaan shanta shaqadooda naasaha walaasheen, laakiin xaggee hooyooyinka ... Akhri wax dheeraad ah
Waad ku mahadsantahay madaxwaynihii hore ee Kongo, kaasoo ilaa 2001; illaa iyo Janaayo 24, 2019, wuxuu sii wadaa inuu ballanqaadyo u sameeyo dadka reer Kongo. "Dhibaato ayaa ka jirta ... Akhri wax dheeraad ah
Mid ka mid ah farxaddu waa tii oo dhan. Midka xanaaqa waa kan oo dhan. Mid ka mid ah ilmada waa kuwa dhammaantood. Tani waa nolosha bulshada dhexdeeda! "... Akhri wax dheeraad ah
Shaqaalaha caruureed ee Nestlé ee Côte d'Ivoire waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu macquulsan, oo ah kiis ku saabsan xaqdarada bulsheed ee ugu caansan uguna carqaladeeya. Shaqaalaha caruurta ... Akhri wax dheeraad ah